Etu esi ajụ ajụjụ na Akụkọ gbasara Instagram: ihe dị ọhụrụ na Instagram | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Noticias, Nkuzi
Anyị na-eche ihu na akụkọ ọzọ dị mkpa nke Instagram mgbe anyị na-ewebata ihe mmado ịjụ ajụjụ na Akụkọ gbasara Instagram. Ngwa nke ghọrọ ọkacha mmasị nke ọtụtụ nde ndị ọrụ maka ịnye interface dị ọcha na ilekwasị anya na ahụmịhe onye ọrụ nke dị anya na Facebook n'onwe ya.
Oge a, dịka n'oge ndị ọzọ, Instagram emeela ya ka ọ bụrụ ọkwa mbata ajụjụ mmado na Akụkọ. Nke ahụ bụ, ịnwere ike ịjụ ndị kọntaktị gị na ndị na-eso ụzọ gị ajụjụ iji nweta nzaghachi ma ọ bụ naanị mara echiche ha banyere otu isiokwu.
1 Instagram na-agbakwunye ọzọ nke mmado ndị ahụ nwere mmasị
2 Etu esi ajụ ajụjụ na Akụkọ gbasara Instagram
Instagram na-agbakwunye ọzọ nke mmado ndị ahụ nwere mmasị
Akwụkwọ mmado Instagram na-enye anyị ohere ịnweta ọrụ ọhụụ iji nye ndị na-eso ụzọ ahụ ahụmahụ na-eso onye ọ bụla n'ime ha ahụmịhe ọzọ. Akụkọ Instagram ha abụrụla mgbanwe zuru oke na netwọk mmekọrịta maara nke ọma, yabụ ụbọchị ole na ole ọ na-eweta akụkọ.
Oge a ọ bụ ajụjụ na Akụkọ gbasara Instagram ndị na-ewere ọrụ niile na-eduga maka netwọkụ na ndị a nwayọọ okpomọkụ na-ewe ndị niile na-eduga ọrụ. N’oge na-adịghị anya ka nzukọ ngwa Instagram ohuru akpọrọ IGTV na nke ahụ na-enye anyị ohere bulite vidiyo ogologo oge na netwọkụ mmekọrịta.
Ọ dighi, Ha abụghị akwụkwọ mmado mmado ma ọ bụ akwụkwọ mmado emojis, nke na-enyere anyị aka ịjụ ajụjụ. N'ebe a, a na-emeghe ajụjụ ndị a, nke na-eduga ọrụ ọhụrụ a n'ụzọ ndị ọzọ, na-echere ọtụtụ ndị na netwọk mmekọrịta nke nkwado dị otú ahụ na ndụ anyị.
Echere m, ihe anyị na-ekwu maka imeghe ajụjụ nwere azịza ụfọdụ nke ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ kọntaktị anyị nwere ike ịdị ogologo oge. Nke a dị iche na akwụkwọ mmado abụọ ahụ a kpọtụrụ aha n'elu, ma mepee ụwa niile nke ohere site na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta Instagram.
Uzo ozo di nma nke ajuju ajuju bu na anyi ga-enwe ikike ịkekọrịta ajụjụ yana azịza ya na akụkọ ọhụrụ Instagram. Yabụ ọdịnaya nke ajụjụ anyị nwere ike iwepụta, nwere ike bụrụ Instagram Akụkọ ọzọ yana na ad infinitum. Na-elekọta mmadụ na netwọk ha maara nke ọma ihe niile na ọtụtụ nde ndị na-eso ụzọ na ya nwere na mbara ụwa nile dị ka; ugbu a, enwere ihe karịrị ndị ọrụ 400 nde na-eji ha kwa ụbọchị.
Nke mbu bu mepụta otu n'ime Akụkọ Akụkọ Instagram ahụ.
Anyị nwere akwụkwọ mmado n’elu ya na ọchị ọchị ihu ọchị. Anyị na-pịa ya.
Anyị pịa banyere ihennyapade nke ajụjụ.
Ugbu a, anyị ga-ajụ ajụjụ ahụ ma debe ya ebe ọ bụla anyị chọrọ na akụkọ Instagram anyị.
Oge onye na-eso ụzọ ma ọ bụ kọntaktị nke Akụkọ Instagram gị meghere ya, ị ga-ahụ akara mmado nke enwere ike ịpị iji zaghachi na. Enweghị azịza ịgba, nke pụtara na ndị ọrụ ga-enwe ike ịza otu oge ọzọ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Maka ndị malitere ajụjụ a na Akụkọ gbasara Instagram, iji hụ azịza ha na ndepụta ndị kiriri. Pịa na azịza ọ bụla iji nwee ike ịmepụta, ọ bụrụ na-ịchọrọ, akụkọ ọhụrụ na Instagram ga-apụta na ajụjụ ị na-aza. N'ụzọ dị otú a, a ga-emepụta ọdịnaya ahụ ruo mgbe mmadụ ga-akwụsị ime ya.
Otu n'ime nkọwa ị ga-echebara banyere atụmatụ a nke ịjụ ajụjụ na Akụkọ gbasara Instagram bụ na, mgbe ị ga-enwe ike ịhụ onye ọrụ onye mere onye ọ bụla azịza Na ndepụta ndị na-ekiri gị, mgbe ịkekọrịta azịza ahụ na akụkọ gị, foto na aha njirimara nke ịkpọtụrụ gị agaghị egosipụta.
Ya mere ị maraworị otu esi ajụ ajụjụ na Akụkọ gbasara Instagram dị ka otu n'ime akụkọ kachasị mkpa nke netwọkụ mmekọrịta na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Site n'ụzọ, ị nwere ya site na mbipute 52 na gam akporo, yabụ lee anya na Playlọ Ahịa Google ma ọ bụ gaa ibudata APK n'okpuru.
Budata Instagram APK.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi ajụ ajụjụ na Akụkọ gbasara Instagram: nnukwu akwụkwọ ọhụụ nke Instagram
Alldocube X, a mbadamba na 2k ihuenyo, Hifi ụda na gam akporo 8.1
Nwelite Netflix kacha ọhụrụ na-enye anyị ohere ibudata ọdịnaya na-akpaghị aka